[Review] Dưỡng mi FEG tốt không? Giá bao nhiêu? Có mấy loại | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Dưỡng mi FEG tốt không? Giá bao nhiêu? Có mấy loại | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Dưỡng mi FEG tốt không? Giá bao nhiêu? Có mấy loại | Muasalebang in Muasalebang
Ufuna ukuba nezinkophe ezinde, ezibushelelezi, ezinamandla nezinhle, kodwa awazi ukuthi ungazinakekela kanjani. Ngalesi sikhathi, imikhiqizo yokunakekelwa kwe-eyelashes ingumsindisi wezinkophe zakho. Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG ingenye yemikhiqizo yokuqala yokunakekelwa nokunakekelwa kwe-elash, ethenjwa abantu abaningi namuhla. Esihlokweni esilandelayo, sizophendula imibuzo ephathelene nokunakekelwa kwe-eyelash ye-FEG futhi sithole ukuthi kuhle ngempela yini njengamahemuhemu.
1 Iliphi izwe ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG?
2 Zingaki izinhlobo zokunakekelwa kwezinkophe ze-FEG ezikhona?
3 Ingabe ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG kuhle futhi kuyasebenza?
4 Ukubuyekezwa kwe-FEG Eyelash Enhancer kanye ne-Pro Advanced Eyelash Enhancer Combo
4.1 1. Izithako ze-FEG .I-Eyelash Conditioner
4.2 2. Ukusetshenziswa kwe-eyelash conditioner FEG
4.3 3. Feg. ukunakekelwa kwe-elash ukubuyekeza
5 Indlela yokusebenzisa i-FEG eyelash conditioner ngempumelelo namanothi
6 Kubiza malini ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG? Ungathenga kuphi okwangempela?
Iliphi izwe ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG?
Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG iwumkhiqizo wenkampani evela e-US egxile emikhiqizweni yokunakekela izinkophe – FEG. Lona uhlobo lobuhle oludume kakhulu e-US futhi oluthenjwa abesifazane abaningi emhlabeni jikelele.
Ngesiqubulo sokusebenza “sokudala ubuhle bemvelo”, imikhiqizo yomkhiqizo we-FEG ihlale ingokwemvelo engu-100% futhi isiza ukulondoloza ingqikithi yobuhle nempilo.
I-Combo FEG Plus Care Eyelash Comprehensive Organic Extraction_Inikeza imisoco ephindwe izikhathi ezingu-4 ukuthuthukisa umphumela wezinkophe ezinde, i-FEG I-DHC Eyelash Tonic (6.5ml), i-DHC Eveline Advance Volumiére 3 In 1 Eyelash Serum (10ml), Eveline Ukunakekelwa kwezinkophe, i-Feg Max eyelash serum yama-curls amade, awugqinsi, emvelo 2in1, FEG O.TWO.O Eyelash Lengthening Serum 3ml, O.TWO.O I-Alika Eyelashes Serum Iqinisa Izinkophe, Yenza Izinkophe Zinde, Zishube Kakhulu, Ivikeleke Emehlo – 5ml, Alika I-Combo Ultra-Pure Coconut Oil Mascara Neop Eyelashes (8ml) + Lip Lipstick I-Ultra-Pure Coconut Amafutha I-Neop Ethambile Ne-Smooth Lip Balm (8ml), NEOP
Zingaki izinhlobo zokunakekelwa kwezinkophe ze-FEG ezikhona?
Manje i-FEG yethule ama-conditioner ama-eyelashe akhethekile angu-2, eyodwa ezosetshenziswa emini kanti enye eyesikhathi sasebusuku ukuze ukwazi ukunakekela kahle kakhulu izinkophe zakho.
Lezi zinhlobo ezimbili zibizwa Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG I-Eyelash Enhancer kanye ne-miPro Advanced enezici ezihlukile ezifanele isikhathi ngasinye. I-daytime eyelash conditioner izoba ne-essence eyengeziwe yokusiza ukuvikela izinkophe emisebeni ye-UV eyingozi ukuya emisebeni yakho. Ngaphandle kwalokho, zombili lezi zimonyo ze-eyelashes ziqukethe izithako ezondla futhi ziqinise ama-eyelashes kusukela ekujuleni kwe-eyelashes.
Ingabe ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG kuhle futhi kuyasebenza?
Ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG kuwumkhiqizo wokunakekela izinkophe oshisa kakhulu emakethe namuhla futhi uthandwa amakholwa obuhle. Kodwa-ke, abantu abaningi basangabaza futhi badidekile mayelana nekhwalithi nokusebenza kahle kwe Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG lokhu.
Ngokusho komkhiqizi wokunakekelwa kwe-eyelashes, i-FEG iwumkhiqizo wokunakekelwa kwe-eyelashe ene-100% ye-extracts yemvelo, okuhlanganisa izithako eziyinhloko ezifana ne-Sodium Chloride, Amanzi Ahlanzekile, I-Citric Acid, I-Disodium Phosphate … isimo sokungezwani komzimba noma esithinta impilo yomsebenzisi. Izithako ze-FEG eyelash conditioner nazo aziqukethe ama-parabens, ama-sulfate, i-gluten, njll., athinta amehlo akho.
Umuzwa wabanye abasebenzisi ngemva kwesikhathi eside bewusebenzisa ukuthi i-FEG eyelash conditioner isiza izinkophe zikhule zibe zinde futhi zibe zinde, i-serum ekuyo iphinde isize izinkophe eziwugqinsi, ezinde futhi zenze izinkophe zibe nokugoqeka okuphelele. Ngaphandle kwalokho, ingasetshenziswa futhi kumashiya ukuthuthukisa isimo samashiya amancane, alula.
Ungase uzizwe uluma futhi ungakhululekile ekuqaleni, kodwa lokhu kuvamile ngoba izinkophe ziyakhuthazwa ukuba zikhule kusukela empandeni. Ngemuva kokusebenzisa cishe amasonto ama-2, lesi simo sizoma futhi izinkophe zakho zizokhula ngokushesha. Ithiphu elincane ukuthatha izithombe zama-eyelashes ngaphambi nangemuva kokuhlola ngokunembe kakhudlwana umphumela ngemva kokusetshenziswa.
Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG kufanelekile kulabo abafuna ukujiya nokwandisa izinkophe zabo, labo abavame ukulahlekelwa izinkophe zabo, amashiya akhanyayo … ukukusiza ukuba ube ngumnikazi we-eyelashes ende egobile kanye namashiya akhangayo.
Ukubuyekezwa kwe-FEG Eyelash Enhancer kanye ne-Pro Advanced Eyelash Enhancer Combo
Ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG okwamanje kungumkhiqizo osetshenziswa abasebenzisi abaningi futhi unikeza ukubuyekezwa okuhle kumaforamu wobuhle. Iningi layo linikeza abasebenzisi izinkophe ezigoqekile ezinde ngemva kwezinsuku ezingaba ngu-14 kuphela zokusetshenziswa. Ukukusiza uqonde kabanzi mayelana nokunakekelwa kwezinkophe ze-FEG, ngezansi sizohlaziya futhi sihlole ama-combo Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG I-Eyelash Enhancer ne-Pro Advanced ngezansi.
1. Izithako ze-FEG .I-Eyelash Conditioner
Yomibili imikhiqizo yokunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG yenziwa ngumkhiqizi ukuthi ikhishwe ngokuphelele emvelweni, ngakho-ke abesifazane abaningi bayathanda futhi bayathanda ukuyisebenzisa. Lo mkhiqizo we-FEG wokunakekelwa kwe-elash uzoqukatha izithako eziyinhloko ezifana namanzi ahlanziwe kanye nezakhamzimba i-sodium chloride, i-disodium phosphate, i-benzalkonium chloride, i-citric acid, i-cellulose gum okutholakale ukuthi iphephile esikhumbeni, ehlinzeka ngokuvuselela izinwele.izinkophe ezinde ngokushesha.
Lapho, i-Feg Pro Advanced eyelash conditioner inezithako ezinemininingwane ehlanganisa ukwakheka kwefomula ethuthukisiwe yemvelo ethuthukisiwe, ama-amino acid, ama-polypeptides athuthukile, i-Biotin, i-Panthenol, i-Benzalkonium chloride, ama-Citric acid, i-Sodium chloride, amanzi ahlanzekile. Futhi I-Feg Eyebrow Enhancer iqukethe Amanzi Ahlanzekile, i-Sodium chloride, i-Disodium phosphate, i-Cellulose, i-Benzalkonium chloride, i-Citric acid, …
Inhlanganisela yalezi zakhi ze-eyelashes isiza i-elash conditioner ye-FEG ukukhuthaza umphumela wokubuyisela izinkophe ukusiza izinkophe ezilimele namashiya abe bushelelezi, made futhi agoqeke.
2. Ukusetshenziswa kwe-eyelash conditioner FEG
Ngokuya ngomkhiqizo othize wokunakekelwa kwe-eyelash, unomphumela ohlukile wokondla futhi usetshenziswa ngezikhathi ezahlukene.
Okwe-FEG Eyelash Enhancer Inikeza umphumela wokunakekelwa kwe-eyelashe esheshayo, iqinisa izakhi ezibalulekile zezinwele zezinwele futhi isekela umsoco we-eyelash ongcono kakhulu. Ngakho-ke ama-eyelashes akho azokhula ngokulinganayo, ngokwemvelo, ngaphandle kokuphuka noma ukunciphisa. Kuzokwenza ama-eyelashes akho aqine, abe made futhi agoqeke ngokwemvelo.
Ngaphandle kwalokho, iphinde ikhuthaze ukunakekelwa nokuvikelwa kwe-eyelashes ngokumelene nokuhlaselwa kwezinto eziyingozi ngaphandle kwemvelo. Lo mkhiqizo uzosetshenziswa ebusuku ukuze ukhuthaze ukukhula kwe-eyelash.
Okwamanje, nakekela izinkophe Feg Pro Advanced Eyaziwa ngokunikeza izakhi zokondla ama-eyelashes phakathi nosuku, okusiza ukwenza ama-eyelashes aqine futhi abushelelezi, akhuthaze ama-eyelashes amade futhi anemibala elinganayo. Iphinde isebenze ukuvimbela ukuphuka kwe-eyelashi futhi iyindlela ehlukile yezandiso ze-eyelashi noma iziqeshana.
Ngenxa yokuqukatha izithako zemvelo ezisiza ukugcwalisa imisoco ukuze kondle izinkophe, kushukumise ama-eyelashes ukuze akhule, izinkophe zakho zizoba namandla futhi zigoqeke ngokwemvelo ngemva kwezinsuku ezingaba ngu-14 kuphela. Lo mkhiqizo wokunakekelwa kwe-elash ungase usetshenziselwe amashiya, uthuthukise isimo samashiya aphuzi futhi usize ube neshiya elimnyama, elimnyama njengoba uthanda.
3. Feg. ukunakekelwa kwe-elash ukubuyekeza
Izinzuzo ze-FEG lash conditioner
Ngezithako ezingenhla kanye nokusetshenziswa, singadweba izinzuzo ezivamile nezivelele zalezi zinhlobo ezimbili zokunakekelwa kwezinkophe ze-FEG kanje:
Izithako zikhishwa ku-100% wemvelo, ngakho-ke iphephile kubasebenzisi futhi ivuselela ama-eyelashes asheshayo, amade futhi abushelelezi.
Izeluleko zokunakekelwa kwe-eyelashes yemikhiqizo yomibili ziklanywe ngokukhethekile, okwenza inqubo yokuxubha i-eyelashes ibe lula, isheshe futhi ibe lula.
Ukuthungwa komkhiqizo wokunakekelwa kwe-Feg eyelash mncane futhi kulula, ngakho-ke akubangeli amajwabu amehlo asindayo noma ukungakhululeki uma isetshenziswa.
Ububi be-FEG lash conditioner
Ngaphandle kwezinzuzo, ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG nakho kunemikhawulo okudingeka inqotshwe. Ububi bayo obugqame kakhulu ukuthi uma busetshenziswa, bungabangela umuzwa wokuluma emehlweni uma ngephutha uvumela umsoco ukuthi ushaye amehlo akho. Ngaphezu kwalokho, le balm eyelash nayo ayisetshenziselwa abesifazane abakhulelwe.
Indlela yokusebenzisa i-FEG eyelash conditioner ngempumelelo namanothi
Ukusebenzisa Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG Ukuze siphumelele, sidinga ukulandela izinyathelo ezijwayelekile futhi siqaphele okulandelayo.
Indlela yokusebenzisa i-FEG eyelash conditioner ngempumelelo?
Isinyathelo 1: Okokuqala, udinga ukuhlanza amehlo akho ngaphambi kokusebenzisa i-Feg eyelash serum.
Isinyathelo sesi-2: Bese, sebenzisa ibhulashi le-Feg eyelash ukuze uxube kahle ukusuka phansi kwe-eyelashes kuya ekugcineni kwejwabu leso.
Ukuphikelela ekusebenziseni lokhu kabili ngosuku ekuseni nakusihlwa, kuhlanganiswe nenhlanganisela yokunakekelwa kwe-eyelashi efanele, kuzokunikeza ama-eyelashes amade, asilika ngendlela ofisa ngayo.
Amanothi lapho usebenzisa i-FEG lash conditioner
Amanye amanothi okudingeka uwanake uma usebenzisa lesi simonyo se-eyelashi yilawa:
Ungafaki imascara emasontweni angu-3 okuqala uma usebenzisa i-FEG eyelash conditioner
Uma usebenzisa izandiso ze-eyelashes, ungasebenzisa kuphela lo mkhiqizo wokunakekelwa kwe-eyelashes ngemva kwezinsuku ezingu-3 zokunwetshwa kwe-elash.
Ukuphikelela ekusebenziseni inkambo efanele emasontweni ama-2 okuqala kuzokunikeza imiphumela oyifunayo
Ungasebenzisi kakhulu i-eyelash conditioner ngoba ingabangela imiphumela emibi yamehlo njengokumnyama, amehlo abomvu
Ungavumeli imisoco ye-Feg eyelash conditioner ingene emehlweni akho ngoba ingabangela ukucasuka kwamehlo
Kubiza malini ukunakekelwa kwezinkophe ze-FEG? Ungathenga kuphi okwangempela?
Njengamanje emakethe kunezindawo eziningi zokuthengisa nokusabalalisa Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG ngamanani ahlukene. Kodwa-ke, kufanele unake, ucabangele futhi ukhethe izindawo zokuthenga ezinedumela elihle ukuze uthenge imikhiqizo yokunakekelwa kwe-eyelash yangempela nekhwalithi. Unga-oda kumasayithi we-e-commerce ezitolo ngezibuyekezo ezinhle ezivela kubathengi noma u-oda ngqo kuwebhusayithi esemthethweni yenkampani.
Ibhodlela ngalinye le-FEG eyelash balm lizobiza cishe u-250,000 VND, kuye ngokuthi ulithenga kuphi. Ungakwazi futhi ukulandelela izaphulelo nokunikezwayo kumasayithi e-e-commerce afana noShopee, Lazada, … ukuze uthenge imikhiqizo ngamanani angcono kakhulu.
Nazi izibuyekezo ezihlobene Ukunakekelwa kwe-eyelashes ye-FEG. Ngethemba, ulwazi olungenhla luzokusiza ukuthi uthole umkhiqizo ofanele wokunakekelwa kwe-eyelashes futhi uthole ngokushesha ama-eyelashes oyifunayo. Ngikufisela inhlanhla.
Tháng 2 cung gì? Những điều nên biết về người sinh tháng 2 | Muasalebang
Cách đổi mật khẩu WiFi trên điện thoại, máy tính mới nhất 2021 | Muasalebang